I-China Step Indexable Gun Drill fektri kanye nabakhiqizi | Deshen
Isinyathelo namathuluzi we-Pilot angahlanganiswa nesicelo sokuqeda ukusebenza okwenziwa kabili-kathathu emgodini owodwa. Ukusetshenziswa kwethuluzi lesinyathelo kunciphisa ngokumangazayo isikhathi somjikelezo, ukusaphaza, kanye nokuqina phakathi kwamamitha.
Ukushayela kwesinyathelo kunemikhawulo yokukhiqiza ngokuya ngamabanga wobubanzi obukhulu ezitebhisini. Ukuthuthukiswa kwe-carbide ekhethekile kwesinye isikhathi kungadingekile ngenxa yendawo epholile yembobo. Ngaphezu kwalokho, ama-chip breakers angahle adingeke ngenxa yokuntuleka kwe-engile yangaphakathi evimba bese iphula ama-chip ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Ngokusebenzisa kahle lolu hlobo lokudonsa okunomshini cishe akukho ukungalingani phakathi kwamadayimitha.
Ukushayela umshayeli wendiza okungagugi kusetshenziselwa ukulandela umgodi okhona ngenkathi usika ububanzi obukhulu futhi unciphise izikhathi zomjikelezo futhi kunciphisa ubuciko phakathi kwezimbobo.
IMINTI-DIAMETER STEP GUNDRILLS
Izingxenye eziningi zidinga izimbobo ezingaba mbili, ezintathu, noma ezine ezahlukahlukene kubhele elilodwa. Izicelo ezithile zingavumela i-gundrill eyodwa yobubanzi obukhulu ukukhiqiza konke noma ezinye zalezi zimbobo, ukunciphisa isikhathi semishini. I-carbide eqinile ye-carbide ingumhlaba ukuze iphrinte ukubekezelela okunika amandla amamitha amaningi ukukhiqizwa kudlula olulodwa.
Esedlule: Umshini wokumba umgodi ojulile we-bar
Olandelayo: Inkinga Nokuxazulula
Gun Drill bush kanye nesiqondisi